लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापनमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश - Kohalpur Trends
२७ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले सातौं तहका अधिकृत भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन अघि नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
संघीय लोकसेवाले अधिकृत स्तरको विज्ञापन छैठौं तहबाट खोल्ने गरेकोमा प्रदेशमा पनि प्रवेश विन्दु छैठौं तहलाई नै बनाउनुपर्ने कर्मचारीको माग छ । ‘संघमा एउटा र प्रदेशमा अर्को मापदण्ड हुन सक्दैन, त्यस्तो भयो भने संघीयता मनपरीतन्त्र हुन जान्छ,’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पन्तले भने ।
Previous Previous post: चोखो मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ ! मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको रहस्य खुल्यो!
Next Next post: चीन सरकारलाई शाहीको चुनौती : नेपालको सीमा नमिचेको प्रमाण देऊ